ရုရှား၊ ယူအက်စ်ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်သူလျှိုဂိမ်းများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
မေလ 9, 2021 မေလ 8, 2021 Christina Kitova အာရှတိုက်, အဲဂုတ္တုပြည်၌, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gigs Freelancing အီဂျစ်, အီဂျစ်လက်ကား - B2B, အသားပေးသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး, ရုရှားနိုင်ငံ, ရုရှားက Global Gigs Freelancing, ရုရှားလက်ကား & B2B, ကြက်ဆင်, တူရကီ Freelance ကို Global Gigs, တူရကီလက်ကား & B2B
Covid 19 ကာကွယ်ဆေးသည်နိုင်ငံရေးအားကစားများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။
ရုရှားအစိုးရမှဘူလ်ဂေးရီးယားသည်လက်နက်ကုန်သွယ်မှုကိုလက်လှမ်းမီသောပုဂ္ဂလိကပါတီများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သတိပြုရမည်မှာကရင်မလင်သည်ဘီလာရုစ်သမ္မတအားအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုလက်စ်ကိုကိုကူကိုလုပ်ကြံမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Biden အစိုးရထံမှအကူအညီတောင်းရန်အမိန့်ပေးခြင်းအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုအဖြစ်ချက်ချင်းသုံးခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်၌ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးကိုပထဝီနိုင်ငံရေးအလွှာရှိဂိမ်းများတွင်ကစားရန်ရည်ရွယ်သည်။
အလက်ဇန်းဒါးဂရီဂရီရီဗစ်ခ်ျလူကရှန်ကိုကသို့မဟုတ်အလက်ဇန်းဒါးရီဟော်ရာဗစ်လူလက်ရှန်ကိုသည်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဘီလာရုစ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးနှင့်တစ် ဦး တည်းသောသမ္မတအဖြစ် ၁၉၉၄ ဇူလိုင် ၂၀ တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Covid ကာကွယ်ဆေး၏နိုင်ငံရေးကိုဆွဲဆောင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဆလိုဗက်ကီးယားတို့ကရုရှားကာကွယ်ဆေးကိုဆန့်ကျင်သော“ Sputnik V” အားနှိုးဆွပေးသောအပြုအမူများ ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည်ကာကွယ်ဆေး၏အရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကရင်မလင်၏ကာကွယ်မှုခေါင်းစဉ်ကိုနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
စင်စစ်အားဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် Coronavirus ကာကွယ်ဆေးများအားလုံးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်အိန္ဒိယသည် Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွင်အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ကာကွယ်ဆေးပမာဏများစွာလိုအပ်နေသည်။
လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၇ သန်းရှိပြီးသေဆုံးသူ ၃၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သောကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်နှင့်လူသေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုရုရှားကမှားယွင်းစွာဖမ်းမိသောကြောင့်နံပါတ်များပိုများနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Sputnik V ကာကွယ်ဆေးအားဥရောပသမဂ္ဂမှအသိအမှတ်ပြုမှုမရှိခြင်းကြောင့်ခရီးသွားလာရန်အတွက်လုံလောက်သည်အထိယခုအချိန်အထိအသိအမှတ်မပြုပါ။
ရုရှားနိုင်ငံသည်ဒုတိယ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး Sputnik Light ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၎င်းသည် Sputnik V. နှင့်တူညီသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ Sputnik Light သည် Sputnik V. ၏ပထမဆုံးဆေးပမာဏသာပါဝင်သည်။ Sputnik V တွင် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့ရိုက်ချက်နှစ်ခုလုံးပါဝင်သည်.
Recep Tayyip Erdoğanသည်တူရကီနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီးလက်ရှိတူရကီသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ယခင်ကတူရကီ ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၄ အထိ၊ ၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၈ တွင်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
တူရကီသည် Coronavirus ကာကွယ်ဆေးထိုးဂိမ်းများတွင်ပါဝင်ရန်လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဂျိုးဘိုင်ဒင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင်တူရကီကျူးလွန်သောအာမေးနီးယားလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသောကြောင့်တူရကီသမ္မတ Recep Erdgodan သည်ရုရှား Sputnik V ကာကွယ်ဆေး၏သန်းပေါင်း ၅၀ ကိုဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာတူရကီအတွက်အာမေးနီးယားလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်အထင်အမြင်သေးမှုကိုပြရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Erdogan ကိုအနောက်သို့မဟုတ်အရှေ့ကမယုံကြည်နိုင်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကပင် Erdogan သည်ခရိုင်းမီးယားကိုရုရှား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒိုနီနိုသက်ရောက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်တူရကီသို့ခရီးသွားခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သော်လည်း Coronavirus ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလုံခြုံရေးအစီအမံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အီဂျစ်သည်တူရကီနိုင်ငံနှင့်အတူခရီးသွားဆိုင်းငံ့ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ပြီးရုရှားခရီးသွားများကိုသူတို့၏အပန်းဖြေစခန်းများသို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
သို့သော်အမေရိကန်နှင့်ရုရှားအကြားတင်းမာမှုများသည်စစ်အေးခေတ်ကာလသို့ထပ်မံရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ မေလ ၆ ရက်နေ့တွင်ရုရှားကအမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုဟုယူဆသောနိုင်ငံခြားဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်သည့်မည်သည့်ရုရှားအမျိုးသားမဆိုပြန်လာချိန်တွင်ရုရှား၌ဖမ်းဆီးခံရမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မည်သည့်အခကြေးငွေနှင့်မည်သို့သက်တမ်းမည်မျှရှိသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ရုရှားတရားရုံးများတွင်တရားစွဲဆိုမှုကိုအာမခံချက်မရှိပါ။ နိုင်ငံတော်၏သစ္စာဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စွဲချက်တင်ခံရသူများကိုကာကွယ်သည့်ရှေ့နေများသည်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်းခြင်းစသည်တို့အပါအ ၀ င်၊ အရာရှေ့နေ - client ကိုအခွင့်ထူးအောက်မှာပါလိမ့်မယ်.
၂၀၂၁ ခုနှစ်အစတွင်ရုရှားတစ် ဦး ချင်းစီသည်နိုင်ငံခြားသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရုရှားနှင့်ယူအက်စ်အကြားဂိမ်းများသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်မှာရှင်းနေပါသည်။
အများပိုင်သတင်း ပထဝီနိုင်ငံရေး သတင်း နိုင်ငံရေး ရုရှားနိုင်ငံ ကြက်ဆင် us ကမ္ဘာ့ဖလား